ओसिनिया सम्मेलनले नेपाल र नेपाली भन्ने मनोभावना थप जागृत गराउनेछ – newslinesnepal
ओसिनिया सम्मेलनले नेपाल र नेपाली भन्ने मनोभावना थप जागृत गराउनेछ
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७६, शुक्रबार २१:३२
धर्मराज अधिकारी, गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ओसेनिया संयोजक हुन् । नुवाकोटको तारुकामा जन्मिएका अधिकारी आजभन्दा २३ वर्षअघि अध्ययनको सिलसिलामा अस्ट्रेलिया प्रवेश गरेका अधिकारी हाले एनआरएनए अष्टे«लिया महादेश संयोजक पन रहेका छन । साथै, अस्ट्रेलियामा सफल व्यवसायीको रूपमा अधिकारीले आफ्नो पहिचान स्थापित गरेका छन् । अष्ट्रेलियामा डोमिनो पिज्जाको फ्रेन्चाइजी सञ्चालन गरिरहेका अधिकारी नेपाल र नेपालीकै लागि भएका कारण एनआरएनए अभियानमा सक्रिय भएर लागेको बताउँछन् । आगामी मे ११ र १२ मा आयोजना हुन लागेको तेस्रो ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलन २०१९ को तयारीमा व्यस्त अधिकारीसँग अधिकारीसँग एनआरएनए, ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलन तथा अष्ट्रेलियामा नेपाली तथा एनआरएन अभियानको समग्र विषयमा जनसवाल दैनिककालागि रामजी बगालेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
नुवाकोटको एउटा गाउँमा जन्मेको सामान्य मान्छे, अहिले अष्ट्रेलियामा एउटा सफल व्यवसायीको रुपमा चिनिनुहुन्छ । यो सफलता कसरी हासिल गर्नुभयो ?
सफलता–असफलता भन्ने कुरा म मान्दिन । म केवल सत्कर्म र इमानदारीतालाई मान्छु । एक जना किसानले आफ्नो परिवारलाई पुग्ने अनाज उत्पादन गरेर थोरबहुत बेचेर आर्थिक उपार्जनसमेत गर्दछ भने त्यो पनि भव्य सफलता हो । सबै मान्छेले जीवनमा एउटा–एउटा काम गर्छन् । मैले पनि त्यस्तै एउटा काम गरेको हुँ । कुनै पनि काम गर्न मान्छेमा एउटा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । म काठमाडौँमा हुँदा वा दिल्लीमा हुँदा पनि बिजनेस नै गर्थे । अस्ट्रेलिया चैँ एजुकेसनको हिसाबले आइयो । सुरुमा काम गरे तर, बिजनेस गर्ने चहनाका कारण बिजनेस शुरु गरे । म कति सफल छु भनेर त अरूले मूल्यांकन गर्ने हो, मैले भन्ने होइन । समग्रमा भन्नुपर्दा म आफूले गरेको सम्पूर्ण कामप्रति खुसी र सन्तुष्ट छु ।
अहिले व्यापार व्यवसायसँगै सामाजिक क्रियाकलापहरुमासमेत व्यस्त छु । व्यक्तिगतरुपमा त जन्मभूमिका विभिन्न स्कुलहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु । अहिले नेपालमा शान्तिपूर्ण माहोल बनेको छ । अहिले दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेको छ । मौकाहरू खोजी रहेका छौँ र अहिले बाहिर बस्ने धेरै नेपालीहरूले नेपालमै लगानी गर्ने सोच बनाएका छन् । त्यसमध्येमा म पनि एक हुँ । अब छिट्टै एउटा कार्यक्रम लिएर नेपालमा जाँदै छु । कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा अलिकति असहज भएको छ । तर, केही गर्ने सोच अवश्य बनाएको छु । मैले सहभागिता धेरै होस भनेर नेपालमा सामूहिक लगानी गर्ने गरी साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्ने कार्यलाई पनि अघि बढाइरहेको छु । नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न अझ पनि गा¥है छ । तर नहुने र गर्न नसकिने कुरा भने केही पनि हुँदैन । नेपालमा धेरै सम्भावनाहरू छन् । नेपालमा एउटा धुलोलाई मात्र कन्ट्रोल गर्ने हो भने अर्बौँ पैसा कमाउन सक्छौ । तर त्यसलाई गर्न दिने नदिने भन्ने बेग्लै कुरा हो । देशलाई सिस्टमेटिक बनाउनुपर्छ, यति मात्र गर्न सक्यौ भने देश आफै स्वतः समृद्ध बन्दै जान्छ ।
एनआरएनए ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलनबारे बताइदिनुहोस ?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को तेस्रो ओसेनिया क्षेत्रीय सम्मेलन यही आउँदो मे ११ र १२ मा हायात रेजेन्सी, डार्लिङ हार्बर सिडनी, अष्टे«लियामा हुँदैछ । म एनआरएनए अष्ट्रलिया महादेश संयोजकको हैसियतले यस्तो महत्वपूर्ण भेलाको खबर दिन पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु । ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलन भन्नाले नै यो ओसिनिया क्षेत्रको सम्मेलन हो र यो सम्मेलनमा यो क्षेत्रको बारेमा चर्चा र विशेष छलफल हुनेछ ।
ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलनको मुख्य उद्देश्यहरू के–के छन् ?
ओसिनिया क्षेत्रको सम्मेलन भएकाले मुख्य कुरा त यो क्षेत्रका उपलब्धि, अवसर, समस्या र आगामी दिनकालागि योजना कार्ययोजनाबारे विशेष चर्चा र छलफल हुनेछ । त्यस्तै ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपाललाई समृद्ध बनाउन कसरी एनआरएनएले बढीभन्दा बढी लगानी, आविष्कार र पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ भनेर विशेष छलफल गर्ने हो । अर्थात, काम गर्ने सिलसिलामा विदेशिएका नेपालीहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप, क्षमता, अनुभव, शिक्षा र कमाई लाई कसरी नेपालमा बृहत्तरुपमा लैजाने भन्नेबारे वृहत् बहस र विमर्श सम्मेलनमा हुनेछ । समग्रमा, नेपालको समृद्धिमा कसरी हातेमालो गर्ने भन्ने बारे नै बृहत् छलफल हुने हो । त्यसर्थ, हाम्रो भेलाको मूल नारा नै– ‘सधैँ सबैकोलागि र समृद्ध नपालेकोलागि गैरआवासीय नेपाली’ भन्ने छ । साथै, सम्मेलनमा नयाँ कार्यसमिति चयनलगायतका विषयहरु पनि छन ।
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि यो सम्मेलनले मद्दत गर्ने भनिएको छ, कस्तो योजना छ त्यसका लागि ?
हो, अत्यन्तै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो । विशेष त हाम्रो देशको विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार भनेकै पर्यटन, कृषि र विद्युत् हो । तसर्थ, हामीले नेपालमा रहेको पर्यटनको प्रचुर अनन्त सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कसरी नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्नेबारे विशेष छलफल चलाउने छौँ । जसले गर्दा, नेपाल सरकारको उद्देश्य अनुसारको ‘भिजिट नेपाल–२०२०’ अभियानलाई अत्यधिक सहयोग पुर्याउन सकिने छ । खासमा, नेपाल त प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूपमा विश्वकै धनी मुलुक हो । जसले गर्दा नेपालमा पर्यटनको अत्यन्तै सम्भावना रहेको छ त्यसलाई क्यास गरेर अब नेपाल समृद्धिको दिशामा लम्किनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो । यसमा हामीले यो सम्मेलनबाट विशेष सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
सम्मेलनमा कति मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनेछ र कति प्रतिनिधीहरु उपस्थित हुँदैछन ?
सम्मेलनमा विश्वभरबाट लगभग २० भन्दा बढी मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता रहने अनुमान रहेको छ । साथै, सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथि, विभिन्न पर्यवेक्षकहरु, सञ्चारकर्मीहरू, पर्यटनविदहरु, कला तथा विज्ञहरु, व्यवसायीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, एनआरएनएका सहकर्मी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्वयंसेवीहरू, नेपालका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलगायत धेरै व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहने छ ।
सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा कस्तो रहेको छ ?
सामान्यतः सम्मेलनको कार्यक्रम ढाँचा अन्य संघसंस्थाहरूको जस्तै क्रमबद्ध प्रक्रियागत नै छन् । ११ मे मा उद्घाटन समारोह र बन्द सत्र हुनेछ भने भोलिपल्ट १२ मे मा सम्पूर्ण एजेन्डाहरूमा विशेष छलफल, छलफलबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र निष्कर्षसहितको पत्रकार सम्मेलन हुनेछ । समग्रमा सम्मेलन सभ्य, भव्य र फलदायी रहने छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ ।
सम्मेलनबारे सूचनाहरू के–कसरी प्रवाह भईरहेको छ ?
हामीले सम्मेलन भव्य बनाउने हेतुले सकेसम्म विश्वभरिका सबै गैरआवासीय नेपालीहरू र अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सम्मेलनबारे सूचना पाउन भनेर सञ्चार जगत र सामाजिक सञ्जाललगायत सबै मिडियाहरुमार्फत व्यापक सूचना प्रवाह गरिनैरहेका छौ । आधुनिक सूचना सञ्चारबाट टाढा भएका मानिसहरूलाई पत्राचार समेत गरिरहेका छौ ।
सम्मेलनले के कति फाइदा पुर्याउछ समग्र पक्षमा ?
हरेक भेला तथा सम्मेलन फाइदाजनक नै हुन्छ । अझ योे ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलनको त झनै विशेष विशेष फाइदाहरू छन् । विशेषतः यो सम्मेलनले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूलाई एकठाँउमा जमघट गराइदिएर आ–आफ्ना भावना साटासाट गराउनुका साथै देशका लागि केही गरौँ भन्ने मनोबल बढाउने छ । साथै, देशको विकास हामी सबै नेपालीहरूको साझा दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने कुराको महसुस गराउने छ । र, नेपाललाई कसरी विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न छलफल हुने भएकोले त्यसबाट विभिन्न ज्ञान, विधि, सूचना, विज्ञान, अनुभव, क्षमता, कला र सिद्धान्तहरूबारे समेत जानकारी हुनेछ । नेपालीहरूमा देश विकासमा हामीले नै लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मनोभाव जागृति गराउनेछ यो सम्मेलनले ।
एनआरएनए धनीकै संस्थामात्र हो भन्ने पहिलेदेखि आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
एनआरएनए भनेको हामी सबै नेपाल छाडेर आएका गैरआवासीय नेपालीे डायस्पोराहरुको साझा संस्था हो । आज म अष्टे«लियामा छु, म जस्तै अरु असी देशमा गैरआवासीय नेपालीहरू छन् वहाँहरूले चाहे पनि नचाहे पनि देश छोडिसकेपछि वहाँहरू स्वतः एनआरएन हुनुभयो । सदस्यता लिने कुरा बेग्लै हो । मैले देखेअनुसार यो संस्था धनी, गरिब, शिक्षित, अशिक्षित सबैको साझा संस्था हो । हामीले सिकेको सीप र आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई आफ्नो देश विकासमा लगानीस्वरुप लैजाने प्रमुख अभिप्राय नै संस्थाको मूल र साझा धारणा हो । त्यसकारण यहाँ धनी पनि छन् , गरिब पनि छन र अन्य सबैखाले वर्ग, धर्मका मानिसहरू पनि छन् ।
यहाँ एनआरएनए अभियानबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि भनेको मान्छेको मनमा हुने भावना हो । मैले गरेको कुरा, म हिँडिरहेको बाटोहरू सही छ कि छैन भन्ने कुरा त आफ्नो अन्तरआत्माले, आफैले बुझ्ने कुरा हो । एनआरएनए पनि एक किसिमको फेसबुक जस्तो सामाजिक सञ्जाल हो । किनभने यसले लाखौँ नेपाली मनहरूलाई एकअर्कामा कनेक्सन गराइदिएको छ । नेपालीहरूबीच भातृत्व भाव विकास गरिदिएको छ । यसलाई नकारात्मक तरिकाले भन्दा पनि सकारात्मक तरिकाले सोच्नुपर्छ । र, सन्तुष्टिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म सामाजिक प्राणी भएकोले सामाजिक अभियानमा जति सकेको सक्रिय सहभागी हुन पाउँदा बहुतै सन्तुष्ट छु ।
एनआरएनएमा प्राय चुनाव जित्नुभन्दा पहिला ठूला–ठूला सपना बाँडेर चुनाव जितेपछि अर्को चुनाव नआएसम्म गुमनाम हुने र फेरि चुनाव आएपछि चाहिँ पुनः अघि सर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यहाँले यो झन्डै डेढ वर्षको कार्यकालमा के–के काम गर्नुभयो ?
क्षेत्रीय संयोजनको काम भनेको त्यो क्षेत्रमा रहेका एनसीसीसँग मिलेर काम गर्ने हो । मैले जहाँ हाम्रो सङ्गठन बनेको छैन त्यहाँ सङ्गठन बनाउने आधारहरूको खोजीमा विशेष पहल गरे । अहिले तत्काल फिजीमा हाम्रो सङ्गठन विस्तारको खाँचो मैले महसुस गरेको छु । साथै हाम्रै नेतृत्वमा सेप्टेम्बर १५ मा सिड्नीमा लगभग २०० जनाको विशेष सहभागितामा ‘नलेज कन्भेन्सन’ ग¥यौ । जसले नेपालमा अक्टोबरमा सम्पन्न ‘विज्ञ सम्मेलन’ लाई विशेष सहयोग पु¥यायो । साथै, अन्यत्रका क्षेत्रहरूमा हुने सम्मेलनलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने पनि हाम्रो दायित्व हो भन्ने मनोभाव अनुसार काम गरे । म एनआरएन अभियानका प्राय सबै कार्यक्रमहरूमा नियमित सक्रियरुपमा सहभागी भइरहेको छु । निरन्तर यो अभियानमा लागिरहेको छु ।
भविष्यमा पनि तपाईँ एनआरएनए अभियानमा नियमित सक्रिय रहिरहनु हुन्छ कि, अरु नै सोच छ ?
एनआरएनए अभियानमा मेरो विगत र वर्तमानको सक्रिय सहभागिताले गर्दा भोलिका दिनमा पनि म यस अभियानको नेतृत्व पंक्तिमा अटाउन सक्छु कि जस्तो लाग्छ । सायद मेरो पनि पालो आउँछ होला र केही नवीन सोचाइहरू बन्छन पनि होला । भविष्यमा पनि मलाई एनआरएन अभियानमा रहेर काम गरिरहन नै मन छ । सम्भावना के कसो हुन्छ हेर्दै जाँउ, त्यो समयले बताउने कुरा हो ।
हामी सबै मिलेर ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलन सफलरुपमा सम्पन्न गरौँ । तपाईहरू सबैको साथ र सहयोग विना हाम्रो सम्मेलन सफल हुन सक्दैन । हामी नेपाली आखिर विश्वभरी जहाँजहाँ छरिएर रहेता पनि हाम्रो जन्मथलो भनेको आखिर नेपाल नै हो । त्यसर्थ, नेपालको विकासमा जति सकेको योगदान पुर्याउनु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य हो । आउनुहोस सबै मिलेर एकताको भावनासहित नेपालको समृद्धिको अभियानमा आ–आफ्नो ठाउँबाट जति सकेको योगदान गरौँ । अन्तमा, ओसिनिया क्षेत्रीय सम्मेलन भव्यरुपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास सबैमाझ जाहेर गर्न चाहन्छु ।